Qunsuliyadda Tuunis ee Liibiya oo la weeraray - BBC Somali
Qunsuliyadda Tuunis ee Liibiya oo la weeraray
Image caption Dhismaha Qunsuliyadda Tuunis ee Liibiya ee la weeraray
Rag hubeysan ayaa weerar ku qaaday Qunsuliyadda ay Tuunis ku leedahay caasimadda Liibiya ee Tripoli, waxa ayna halkaasi ka afduubteen 10 qof oo ka tirsan ergada diblumaasiyadeed ee Tuuniisiya.
Dowladda Tuuniisiya ayaa cambaareysay weerarkan ugu dambeeyay ee lagu qaaday xarunta qunsuliyaddii ay ku laheyd Liibiya, waxayna weerarkaasi ku tilmaantay mid ka dhan ah madaxbanaanideeda.
Essam Naas, oo ah afhayeen dhanka amniga ah oo ku sugan magaalada Tripoli ayaa BBCda u sheegay in dadkii weerarkaasi gaystay ay adeegsanayeen sideed baabuur oo uu ku jiro bas nooca yaryar ah, iyagoo halkaa ka afduubtay qaar ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda.
Ilaa iyo haatan ma ay cadda kooxda weerarkaasi ka dambeysay iyo ujeedada ay laheydba.
Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Tuunis ayaa waxaa looga digay muwaadiniinta dalkaas in ay u safraan waddanka Liibiya, marka laga reebo dadka uu safarkoodu yahay mid lagama maarmaan ah.
Tuunis ayaa bilihii la soo dhaafay magaalada Tripoli dib uga aasaastay adeegga qonsuliyadda, kaddib markii la xiray inta badan safaaradaha shisheeye xagaagii lasoo dhaafay.
Dalka Liibiya ayaa waxaa ka jira laba dowladood oo isdiidan, waxaana mid ka mid ah oo la soo doortay ay xarunteeda tahay bariga dalkaasi, halka midda kalana ay ku sugan tahay caasimadda, balse dowladan dambe ma ahan mid ay aqoonsan tahay beesha caalamka.
Inta badan howlgallada diblumaasiyadeed ee ajaanibta oo ay ku jirto Qaramada Midoobay ayaa isaga baxay magaalada caasimadda ah bishii Luulyo, kaddib markii ay halkaa ku dagaalameen maleeshiyaad isdiidan oo hubeysan.